Uluntu lwaseMpuma Afrika lusungula iphulo elitsha lokhenketho lwengingqi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Uluntu lwaseMpuma Afrika lusungula iphulo elitsha lokhenketho lwengingqi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Safety • Shopping • News Sustainability • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Uluntu lwaseMpuma Afrika lusungula iphulo lokhenketho lwengingqi
Eli phulo limiselwe ukuba liqhube iiveki ezintathu, ukususela ngomhla woku-1 kweyoMnga ka-2021. Liyinxalenye yokuphunyezwa kweSicwangciso-qhinga seNtengiso yoKhenketho ye-EAC kunye nesiCwangciso sokuBuyisa i-EAC esixhaswa yi-Arhente yoPhuhliso yaseJamani, i-GIZ.
The Uluntu lwaseMpuma Afrika (EAC) uye waphehlelela iPhulo leeNdaba zoKhenketho lwezoKhenketho lwaseKhaya le-EAC elimiselwe ukupapasha iindawo neenkonzo ezinomtsalane kubakhenkethi kuzwelonke nakwingingqi, ejolise ekuvuseleleni nasekuphuhliseni uhambo lwangaphakathi kwingingqi.
Isungulwe kule veki, iphulo elithi “Tembea Nyumbani”, okanye “Ndwendwela eKhaya” lijonge ukutsala abemi baseMpuma Afrika ukuba bahambe kumazwe abo, emva koko bajikeleze ummandla, ngeenzame zokuvuselela ukhenketho lwasekhaya nolwengingqi kuwo wonke ummandla weMpuma Afrika, phakathi. ubhubhani we-COVID-19.
Eli phulo limiselwe ukuba liqhube iiveki ezintathu, ukusuka ngomhla woku-1 kuDisemba 2021. Liyinxalenye yokuphunyezwa kweSicwangciso sokuThengisa kwezoKhenketho se-EAC kunye nesiCwangciso sokuBuyisa i-EAC esixhaswa I-Arhente yoPhuhliso yaseJamani, i-GIZ.
I-EAC Oonobhala baphehlelele eli phulo kwikomkhulu labo kuMantla eTanzania kwisixeko sabakhenkethi eArusha.
Ukhenketho lunegalelo elimandla kuqoqosho lwaMazwe angamahlakani e-EAC kunye nobhubhane, lufake igalelo le-10 lepesenti yeSambuku seMveliso yeLizwe (i-GDP), i-17% yemivuzo yokuthumela ngaphandle kunye nesi-7% ekudaleni imisebenzi.
Ubhubhani we-COVID-19 ubone icandelo lichaphazeleka kakubi ngokufika kwabakhenkethi bamazwe ngamazwe EMpuma Afrika yehle malunga ne-67.7%, ukuya kutsho kwi-2.25 yezigidi zabantu abafikayo ngo-2020 xa kuthelekiswa ne-6.98 yezigidi ngo-2019.
I-EAC UNobhala Jikelele uGqr. Peter Mathuki ukhuthaze abadlali becandelo labucala lezokhenketho ukuba bandise iipakethe ezifikelelekayo kubemi baseMpuma Afrika ukuze babahende ukuba bathabathe ithuba leeholide ezifumanekayo ngeli xesha leeholide zeholide.
“Ngemirhumo ekhethwayo yokungena kunye namaxabiso ngoku anyuselwe kubemi be-EAC, lifikile ixesha kubantu baseMpuma Afrika ukuba baphonononge iinkcubeko ezahlukeneyo, bathathe uhambo lokundwendwela kunye nokutyelela iilwandle ezingaqhelekanga phakathi kwamanye amathuba okunikezelwa ngummandla”, utshilo uGqr. Mathuki ngexesha losasazo. Uphehlelelo olubanjelwe kwikomkhulu le-EAC e-Arusha phakathi kule veki.
UGqr. Mathuki uqhube wathi I-EAC uphuhlise i-EAC Pass edibanisa kwaye iqinisekise uvavanyo lwe-COVID-19 kunye nezatifikethi zokugonya ze-EAC Partner States ukuze kube lula ukuhamba kulo mmandla.
Iphulo iTembea Nyumbani liqhutywa yi-EAC ngokubambisana ne-East African Tourism Platform emele amashishini okhenketho kulo mmandla.
Ngeli phulo, abanini beehotele nabanye ababoneleli ngeenkonzo zokhenketho bayakhuthazwa ukuba bakhuthaze iipakethe ezifikelelekayo kubemi be-EAC.
Kwelakhe icala, uMlawuli we-EAC ophethe iCandelo leMveliso, uMnu. Jean Baptiste Havugimana uqaphele ukuba i-EAC yenza imitsi ekuqinisekiseni ukuba i-Single Tourist Visa yamkelwa ngawo onke amazwe e-EAC Partners.
“IBhunga leCandelo lezoKhenketho kunye noLawulo lweZilwanyana zaseNdle ngethuba lendibano yabo eyoNgezelelweyo ebibanjwe ngoJulayi walo nyaka bacebise ukuba iOfisi yoonobhala ibize intlanganiso yamacandelo amaninzi aquka amacandelo abalulekileyo afana nelezoKhenketho neZilwanyana zasendle, iMmmigration kunye noKhuseleko ukuze kuphuhliswe isicwangciso-nkqubo sokwaziswa kobume. I-Visa yabakhenkethi enye ngawo onke amaZwe angaMaqabane, ”utshilo.
UMnu. Havugimana uqaphele ukuba intlanganiso iya kubizwa ekuqaleni kwe-2022, yongeza ukuba xa yamkelwe ngokupheleleyo i-Visa iya kwenza lula ukuhamba kwabakhenkethi bangaphandle kulo lonke ummandla.
Ngaphaya koko, iGosa lezoKhenketho eliyiNtloko ye-EAC, uMnu. Simon Kiarie, uqaphele ukuba iiprojekthi ze-EAC ezithe ngeenzame zokhenketho ezimandundu kwinqanaba lengingqi nelesizwe; ummandla uya kuba nakho ukufumana abakhenkethi abamalunga nezigidi ezi-4 kunyaka ozayo.
“Ukuchacha kwecandelo lezokhenketho kukwinqanaba eliphezulu kwaye silindele ukuba ngonyaka ka-2024, sizakufumana malunga ne-7 yezigidi zabakhenkethi xa kuthelekiswa nabakhenkethi abazizigidi ezi-2.25 abarekhodwe ngo-2020”, utshilo.